पहिलोपटक सेक्स कसरी गर्ने ? यस्ता छन् टिप्स - samayapost.com
पहिलोपटक सेक्स कसरी गर्ने ? यस्ता छन् टिप्स
शुरुवातमा सेक्स कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुदैन । सेक्सको बारेमा जति पढे पनि अथवा फिल्ममा हेरे पनि वास्तविक जिवनमा सेक्स गर्न निकै मुश्किल हुने गर्छ । त्यसकारण यहाँ पहिलोपटक सेक्स लाईफ सुरु गर्नेहरुको लागि केही टिप्स यस्ता छन्
सेक्स पोजिसन १. मिशनरी
यो सबैभन्दा कमन सेक्स स्टाईल हो । जब तपाई सुत्नुहुन्छ । आफ्नो खुट्टा समेट्नुहोस् । जब तपाईको पार्टनर माथि चढ्छन् अथवा तपाईको भित्र पेनिट्रेट हुन्छन् तब तपाईको दुबै खुट्टा पार्टनरको माथि राख्नुहोस् । र उनलाई अझ नजिक ल्याउनुहोस् । जसले उसलाई सपोर्ट मिल्छ ।
सेक्स पोजिसन २
तपाईको खुट्टाको कारण पार्टरलाई पेनिट्रेट गर्न गाह्रो पर्नसक्छ । यस्तो बेला तपाईको हिपको नजिक दुइृ तीन ओटा तकिया राख्नुभयो भने उसलाई सजिलो हुन्छ । तपाई यो पोजिसनमा नर्मल तरिकाले सेक्स गर्न सक्नुहुन्छ ।
सेक्स पोजिसन ३
यदि तपाईको पार्टनरलाई पेनिट्रेट गर्न गाह्रो भैरहेको छ भने तपाई बेडको किनारमा पल्टिनुहोस् । तपाईको खुट्टा तल र उ उभिएको पोजिसनमा पल्टिनुहोस् । जब पार्टनर तपाईको नजिक आउँछ त्यसपछि उसको काधमा खुट्टा हाल्नुहोस् । त्यसपछि आरामले सेक्स गर्नुहोस् ।
सेक्स पोजिसन ४
जब तपाईको पार्टनर पल्टिएको र तपाई याक्टिभ मोडमा हुनुहुन्छ भने उनको पेनिसलाई हातले चलाउनुहोस् । र उनी माथि चढ्नुहोस् । तपाईको भजैना उनको नजिक आएपछि पेनिसलाई भित्र छिराउनुहोस् ।एजेन्सी
जेनिफर लोपेजले गीतका लागि उतारिन् सबै कपडा
मिशालसंग ब्रेकअप भएको बर्षदिन पनि नपुग्दै फेरी प्रेममा परिन् आमिरकी छोरी इरा
अंकिताले प्रेमीसँग डान्स गरिरहेको भिडियो पोष्ट गरेपछि रिसाए सुशान्तका प्रशंसक
हेर्नुहोस् ज्याकलिन फर्नान्डिसको टपलेस फोटो
डिशहोम रियालिटी टिभी च्यानलमा ‘खै कुरा बुझेको ?’ हाँस्य टेलिसिनेमा प्रशारण हुदै
भारती र हर्ष डिसेम्बर ४ सम्म न्यायिक हिरासतमा